FAHA-90 TAONAN’NY RNM: Misongadina ireo asa fanatsarana, tafapetraka ny « Studio Vahandanitra » – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 8:13
Natokana ho fanodinana tantara ny Studio Vahandanitra.
Accueil/Samihafa/FAHA-90 TAONAN’NY RNM: Misongadina ireo asa fanatsarana, tafapetraka ny « Studio Vahandanitra »
FAHA-90 TAONAN’NY RNM: Misongadina ireo asa fanatsarana, tafapetraka ny « Studio Vahandanitra »
Notontosaina omaly ny ivon’ny fankalazana ny faha-90 taonan’ny onjampeo nasionaly malagasy (RNM). Anisany nampiavaka ny fanamarihana tetsy Anosy, ny fampahafantarana sy fampahatsiahivana ny tantaran’ity onjampeo malagasy ity, sy ny ezaka maro natao tao anatin’ny roa taona nanatsarana izany. Tanjon’ireo mpiasa ankehitriny ny fanakaikezana ny mpihaino amin’ny alalan’ny fanatsarana manaraka ny vanim-potoana…
Lucien R. 24 juillet 2021
29 Aprily 1931-29 Aprily 2021. 90 taona katroka amin’ity taona ity no niorenan’ny onjampeo RNM teto Madagasikara. Maro ireo sehatra nolalovana nandritra ny taona maro, niaina sy nampiaina ny tantaran’i Madagasikara teo amin’ny sehatry ny zava-kanto fa indrindra ny fanomezana toerana ambony indrindra ny maha Malagasy. Nanana anjara toerana manokana ara-politika koa ity Radio Nasionaly Malagasy ity teo amin’ny tantaran’i Madagasikara. Tao amin’ny Radio Nasionaly no nampitaina ireo kabary goavana nataon’ireo mpitantana rehetra izay nifandimby teto amin’ny Firenena. Nampiaina ary mbola mampiaina ihany koa ireny lanonam-pirenena ireny hatramin’izao. Tena nanan-danja ara-politika ny radio Nasionaly Malagasy.
Raha tsiahivina dia efa nanomboka tamin’ny fiafaran’ny Repoblika voalohany no zava-dehibe ho an’izay nikasa haka fitondrana ny hidirana tao amin’izany Radio Nasionaly Malagasy izany. Nisy ny tranga nampalahelo, isan’izany ny niseho tamin’ny taona 2009 izay nahamay ny tranon’ny onjampeo Madagasikara. Niaina tao anatin’ny fotoam-pifaliana ihany koa ity Radio Madagasikara ity, tahaka ny taona 2019 nandritra ny lalao rehetra nataon’ny ekipan’ny Barea ka nandritra ny fodiana teto an-tanindrazana. Ny resaka fanatanjahantena no anisany nampamiratra ny RNM tamin’ny alalan’ny fitantarana mivantana izay tontosain’ireo mpanentana toa an’i Alphonse Andriamahaly, Rado Marcel, Marius Rasoanaivo, Jean Claude Andrianaivo, Ruffin Rakotomaharo izay nampiaina mivantana ireny lanonana ara-panatanjahatena ireny. Maro ireo fandaharana nanana ny maha izy azy tamin’ity onjampeo ity. Anisany nanosika mpanakanto maro ihany koa ity Radio malagasy ity ary nanao hatrany ho vaindohan-draharaha ny maha zava-dehibe ny sangan’asan’ireo mpanakanto Malagasy.
Nisy ihany koa ny fanatsarana natao mba hampivoarana ny sehatry ny zava-kanto. Nambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina Johary Andriamahery Ralaimazava, fa isan’ireo nanaovan’ny Minisitera mpiahy ezaka goavana ny fanatsarana, ny fanomezana endrika vaovao, fa indrindra ny fampitaovana samihafa ity Radio Nasionaly Malagasy ity. Nisy ny fanorenana studio arifomba sy manaraka ny fenitra izay naorin’ny Minisitera ho an’ny RNM, Isan’izany ny Studio Vahandanitra izay vao notokanana omaly ary nanamarika ny fankalazana ity faha-90 taonan’ny RNM ity. Ahitana ireo fitaovana vaovao manaraka ny fivoaran’ny toetry ny andro ity efitrano fitenenana vaovao ity. Nikoizana teo amin’ny filalaovana tantara ary namela mamy tao amin’ny RNM i Vahandanitra, ka izany no antony nampitondrana ny anarany ity studio ity. Marihina fa ity studio ity no tsangam-bato manamarika ny faha 90 taonan’ny Radio Nasionaly Malagasy, izay naorina tao anatin’ny roa taona sy tapany. Manamarika izao faha-90 taonan’ny RNM izao ihany koa ny nanokafana amin’ny fomba ofisialy ny tranonkalan’ny Onjam-peo nasionaly malagasy, mba hifanaraka amin’ny toetrandro, izay natao hizarana vaovao marolafy ho an’ny mpankafy.
Marina (Mpianatra asa) sy LR.
TOERAM-PONENANA ETSY IMERITSIATOSIKA: Trano miisa 240 amin’ireo 320 hatao no efa andalam-pahavitana
FITONDRAM-PANJAKANA: Nanokatra famotorana momba ny olan’ny vatsim-pianarana tao Barikadimy